What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) –2| သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) – 1
January 29, 2010 · 1:11 pm
What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) – 2
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရေးဆိုတာ ဘာလဲ (စိတ်ပညာရှုထောင့်မှ ရှုမြင်ချက်များ)
ဂေါ်ဒွန် အောလ်ပေါ့ (Gordon Allport 1897-1967) – ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်၏ “သမ္မာနည်းကျ ခံယူထားသည့် အထွဋ်အမြတ်လမ်းစဉ် (supreme context) ကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သူ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (personality) ကို ကျယ်ပြန့်လာစေရန် (enlarge)၊ ပြည့်စုံကုံလုံစေရန်(complete) အဆုံးစွန်သော အားထုတ်မှု” ဖြစ်သည်။
အေဘရာဟမ် မက်စလို (Abraham Maslow 1908-1970) – ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ လူထုပရိသတ်အတွက် ရရှိရောက်ရှိ နိုင်လောက်သော ပရောဖက်/တမန်တော်၏ မူလနှုတ်ကပါတ် (အထွဋ်အထိပ်သော အတွေ့အကြုံ) အတိုင်း အားထုတ်မှုပြုသော တရားတော်စနစ်နှင့် ဘာသာရေးထုံးတမ်း တို့ကို ခေါ်သည်။ ဘာသာရေးသည် အရင်းမူလအားဖြင့် နဂိုရ်သက်သက်ဖြစ်သော တန်ဖိုးများအတိုင်း နာမ်ပိုင်းအားဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ခတ်ရန် အားထုတ်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တွေ့ကြုံရမှုသည် သဘာဝတ္တ၏ အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီး ဘာသာရေး တန်ဖိုးသည် လူသား၏ တန်ဖိုးပင်ဖြစ်သည်။
ဗစ်တာ ဖရန်ကယ် (Viktor Frankl 1905-1997) – ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ “အဓိပ္ပာယရှိလိုသည့် ဇောဆန္ဒ” (will to meaning) လျှင် အရင်းအမြစ်ရှိသော “နာမ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ မသိနိုင်မှု”၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သော အန္တိမ အဓိပ္ပာယကို ရှာဖွေမှုအဖြစ် ဘာသာရေးသည် “မသိနိုင်သည့် ဘာသာရေးကိစ္စ”၏ အသိတရားဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်ပြချက်လည်းဖြစ်သည်။ ငုပ်ကွယ်တိမ်မြုပ်နေမှုမှသည် လွန်မြောက်စေခြင်းကိစ္စ ဖြစ်သည်။
Tagged as Philosophy, Psychology, Religion
One response to “What Is Religion? (from the Viewpoint of Psychology) – 2”